Ngubani oPhendula iSaveyi yakho? Ukuqinisekiswa kwenziwa ngokuLula | Martech Zone
Ngubani oPhendula iSaveyi yakho? Ukuqinisekiswa kwenziwa ngokulula
NgoMvulo, Matshi 26, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UHanna Johnson
Ukucela ingxelo yabathengi ngaphambi, ngexesha, nasemva kokumilisela ishishini elitsha yindlela elungileyo yokufumanisa ukuba ulinganisa njani emehlweni abathengi bakho. Awusoze ufune ukucinga ukuba uyazi ukuba intengiso yakho ekujolise kuyo (oomama abasebenza iminyaka engama-30 ukuya kwengama-45, umzekelo) uziva njani ngale nto uyenzayo, ngakumbi kuba kulula ukubabuza ngokwakho. Iindaba ezimnandi zabathengisi, nokuba usebenza kwinkampani enkulu okanye uqaliso oluncinci, kukuba kukho inani lezixhobo ezikhoyo zokukunceda ngomsebenzi wokufikelela kuvavanyo lwentengiso ojolise kuyo, nokuba yeyiphi na ibhajethi okanye inqanaba lakho. yobungcali.
Thumela i Uvavanyo lwe-Intanethi ukufunda okungakumbi malunga nabathengi bakho, ukuba baziva njani malunga neemveliso zakho ezitsha, ukuba bangathanda ukukubona ntoni kwixesha elizayo, kwaye loluphi uhlobo lomyalezo oza kuba nefuthe kubo. Unenketho yokuvavanya abathengi bakho ngokuthe ngqo, okanye ungaya kwinkampani yeqela lesithathu ukuthenga izimvo zabaphenduli ojolise kubo. KwiSurveyMonkey, sinikezela Uphononongo lweMonkey ukunxibelelana nabathengi kunye nabachaphazelekayo ongathanda ukufikelela kubo.
Kodwa uza kuthini ukuba umphenduli wophando lwakho, othi ungumntu wase-Mexico oneminyaka engama-35 ubudala osebenza kwishishini lokhathalelo lwempilo kwaye unabantwana aba-2, ngenene ungumntu omhlophe oneminyaka eli-18 ubudala, oomatshini abangasebenziyo ogama linguFrank? Izigqibo ozenzayo kunye neziphumo zophando lwakho lokwaneliseka komthengi zithembekile kuphela njengolwazi onalo malunga nabantu abathatha uphando lwakho.
At SurveyMonkey, sinamaqela apheleleyo asebenzela ukufumana ezona ndlela zokuqinisekisa ubume beephaneli zophando. Inkqubo ye- Iqela le-TrueSample iyasebenza Iposi yeRealCheck kunye neRealCheck yeNtlalontle, Izisombululo eziqinisekisa ubungqina babaphenduli bophando ngegama labo nedilesi kunye nedilesi ye-imeyile, ngokwahlukeneyo. Le ndlela inezandla ezibini yovavanyo lokuphendula kwabaphenduli yenzelwe ukuba kuqinisekiswe ukuba banzima kangakanani na ukuqinisekisa abaphenduli, abafana nabaneminyaka eli-18 ukuya kwengama-24 ubudala (uxolo uFrank).
Sino Dr. Phil kunye neqela lakhe iindlela zovavanyo abasebenza ukufumanisa abo banelisayo, abantu abakhawulezayo kuphando lwakho ngaphandle kokukunika ixesha nengqwalaselo ekufaneleyo. Indlela kaGqirha Phil ixhomekeke Ummiselo weBasesian, indlela echonga izinto ezingangqinelaniyo (umphenduli echonga njengendoda, umzekelo, kwaye emva koko kumbuzo ophendulayo "ewe," ukhulelwe kule minyaka mithathu idlulileyo).
Ukuqinisekisa ubuni babaphenduli bophando bobabini bubugcisa kunye nesayensi, kodwa iindaba ezimnandi zezokuba awuwedwa kwimfuno yakho yabona baphenduli bathembekileyo. Kukho abantu abakrelekrele kakhulu abaphosa bajika ebusuku, abakwazi ukulala becinga ngeyona ndlela yokuqinisekisa abaphenduli bakho. Ngokukrakra. Kuba ngcono, abaphenduli bophando abaqinisekisiweyo bathetha iziphumo zophando ezinokuthenjwa. Iziphumo zophando ezinokuthenjwa zithetha izigqibo ezingcono ezisekwe ngaphandle kwezo ziphumo. Kwaye ukuthatha izigqibo ezingcono kukwenza ubonakale ulungile, nto leyo esenza sizive sonwabile. Wonke umntu uyaphumelela. Ngaphandle kukaFrank.
tags: Iposi yeRealCheckI-RealCheck yeNtlaloumphenduli wophandoSurveyMonkeyIsampulu yeNyanisoku vumela
UHanna yiMarket yeMithombo yeendaba yeNtlalo ye SurveyMonkey. Ukuthanda kwakhe zonke izinto zentlalo kudlulela ngaphaya komjelo wakhe weTwitter. Uyabathanda abantu, iyure yokonwaba, kunye nomdlalo olungileyo wezemidlalo. Uye waya kwilizwekazi lonke ngaphandle kweAntarctica, kodwa usebenza kuloo nto ...
Sebenzisa iPinterest ukubandakanya abaSebenzi kunye nokuNyusa i-SEO
Feb 19, 2016 ngo-12: 37 PM